Showing १०१-११० of ३९४ items.
एमी सलमानकी हिरोइन !
मुम्बई / बलिउड अभिनेता सलमान खानको हिट फिल्म ‘किक’को सिक्वेलको सुरसार बलिउडमा सुरु भइसकेको छ । फिल्मको पहिलो भागले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट व्यापार गरेपछि फिल्मको दोस्रो भागका लागि कलाकार छनोट भइसकेको छ । समाचारअनुसार फिल्ममा शीर्ष भूमिकामा सलमान नै हुनेछन् । फिल्मका लागि यसअघि नायिका जेकलिन फर्नान्डिज फाइनल गरिए पनि अहिले आएर उनको स्थानमा एमी ज्याक्सनको प्रवेश भएको खबर छ । यो फिल्म सन् २०१९ को क्रिसमसमा रिलिज हुनेछ । फिल्मको पहिलो भागमा सलमान र जेकलिन बाहेक रणदीप हुड्डा र नवाजुद्दिन सिद्दीकी पनि थिए । फिल्ममा नवाजले भिलेन चरित्र निर्वाह गरेका थिए । यो फिल्मलाई दर्शकले नि
प्रकाशित मितिः फाल्गुन २, २०७४
समाजिक सञ्जालमा एक युवतीको तश्बिर यतिबेला खुब भाइरल भइरहेको छ । इन्स्टाग्राममा उनी ट्रेन्डिङमा परेकी छिन् । युवतीको हेराई निकै लोभलाग्दो भएको भन्दै ट्वीटरमा पनि उनको नाम शीर्ष १० मा छ । धेरैले उनको तश्बिरमा लोभलाग्दा कमेन्ट गरेका छन् । उनी भारतको मलयालम नायिका प्रिया प्रकाश वारियर हुन् । १८ वर्षीया प्रिया केरलको त्रिशुरमा बस्छिन् । उनको डेब्यू फिल्म ‘ओरु अदार लभ’ हो । यही फिल्मको ‘मानिक्या मलाराया’ भिडियो गीत अहिले भाइरल भइरहेको छ । साउथकी यी एक्ट्रेसको पपुलारिटीलाई मध्येनजर गर्दै चाँडै बलिउडका मेकर्सले उनलाई साइन गर्न होड लाग्ने देखिएको छ । एक इन्टरभ्यूमा प्रिया प्रकाशलाई मलयालम फिल
बलिउड अभिनेता वरुण धवन र अभिनेत्री अनुष्का शर्माको नयाँ फिल्म ‘सुई धागा’ को फर्स्ट लुक बाहिर आएको छ । वरुणले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमार्फत फिल्मको फर्स्ट लुक शेयर गरेका छन् । तश्बिरमा अनुष्का र वरुण देखिएका छन् । अनुष्काले साडी लगाएकी छिन् । वरुणले तश्विरमा क्याप्सन लेखेका छन्, ‘मौजी र ममतासँग भेट्नुहोस् २८ सेप्टेम्बरमा ।’ फिल्मलाई शरत कटारियाले निर्देशन गर्दैछन् । फिल्मको कथा पनि उनी आफैंले लेखेका हुन् । अनुष्काले जनवरीमा आफ्नो एक तश्विर शेयर गरेकी थिइन्, जहाँ उनी सियोले कपडा सिलाउँदै गरेको देखिएकी थिइन् । यस्तै, वरुणले पनि आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा कपडा सिलाउँदै गएको एक फोटो शेयर ग
प्रकाशित मितिः फाल्गुन १, २०७४
बलिउड इन्डस्ट्रीमा प्रत्येक दिन कयौं गीत रिलिज हुने गर्छन् तर फेरि पनि अब इन्डस्ट्रीमा ९० को दशकको हिट गीतको रिमिक्स्ड भर्जन विना कुनै फिल्म पूरा हुँदैनन् । यस्तै, चाँडै बलिउड स्टार टाइगर श्राफ र दिशा पटानीको फिल्म ‘बागी २’ मा पनि ९० को दशकको हिट गीत राखिने भएको छ । यो गीत बलिउड सुन्दरी माधुरी दीक्षितमाथि फिल्मांकन गरिएको थियो । खासमा, माधुरीको गीत ‘एक दो तीन’ को करा गर्दैछौं र यो गीत फिल्म 'तेजाब' को हो । तर, यो गीतको रिमेकमा माधुरी होइन ज्याकलिन फर्नान्डेज देखिँदैछिन् । अहिले यो गीतको सुटिङ भइरहेको छ । गणेश आचार्य र अहमद खानले मिलेर गीतको कोरियोग्राफी गरिरहेका छन् । फिल्म ‘बागी २’
फेस्टिभल रिलिजको फर्मूला बलिउडमा निकै हिट छ र यही कारण कुनै स्पेशल दिनमा ठूला भनिएका बलिउड सुपरस्टारका फिल्म रिलिज हुने गर्दछन् । वर्ष २०१७ को ईद र क्रिसमस सलमान खानको नाममा रहेको थियो । ईदमा उनको फिल्म 'ट्यूबलाइट' रिलिज भएको थियो भने क्रिसमसमा 'टाइगर जिन्दा हे' । सलमानको 'टाइगर जिन्दा हे' ले धमाकेदार विजनेश गरेको छ र अब उनले अर्को वर्ष अर्थात्, २०१९ को ईद र क्रिसमस पनि आफ्नो नाममा गरेका छन् । सलमानको नयाँ फिल्म 'भारत' अर्को वर्ष २०१९ को ईदमा रिलिज हुँदैछ । यस्तै, वर्ष २०१४ मा आएको उनको हिट फिल्म 'किक' को सिक्वेलको पनि निर्माण घोषणा गरिएको छ । 'किक २' अब अर्को वर्षको क्रिसमसमा रिलिज
प्रकाशित मितिः माघ २५, २०७४
बलिउड फिल्म ‘पद्मावत’ पश्चात फिल्म ‘मनिकर्णिका’ पनि विवादित भएको छ। अभिनेत्री कंगना रनावतको अभिनय रहेको फिल्मको विरुद्ध सर्व ब्राह्मिण महासभा समूह उत्रिएको छ। फिल्ममा झाँसीको रानीको ऐतिहास कथा तोडमोड गरेको भन्दै सर्व ब्राह्मिन महासभाले फिल्म निर्माणमा रोक लगाउने चेतावनी दिएको हो। महासभाका सुरेश मिश्रले भने, ‘फिल्मले इतिहासलाई तोडमोड गरेको छ। यो ‘झाँसिकी रानी’को कथामा आधारित छ र यसमा करोडौं खर्चिएको छ। हामीलाई त्यसमा मतलब भएन। यसरी इतिहासलाई तोडमोड गरेर फिल्म बनाउँन दिँदैनौं।’ महासभा समूहले फिल्मको कथा परिकल्पना गरेर लेखिएको र त्यसमा रानी लक्ष्मी बाई र ब्रिटिस अफिसर रोबर्ट इलिसबीच प्रणयको दृश
अक्षय कुमार अभिनित फिल्म ‘प्याडम्यान’ शुक्रबार रिलिज हुँदैछ। यो दक्षिण भारतका एक व्यक्ति अरुणाञ्चलम् मुरुगनांथमको कहानीमा आधारित फिल्म हो। अक्षय मुरुगनांथमकै भूमिकामा छन्। मुरुगनांथमले सस्ता स्यानिटरी प्याड बनाएर करोडौं महिलाको जीवनमा बदलाव ल्याइदिएका छन्। उनले प्याड मात्रै होइन, प्याड निर्माण गर्ने मेसिनसमेत गरिब महिलाहरुको पहुँचमा पुर्‍याइदिएका छन्। श्रीमतीका लागि बनाए प्याड महिनावारीको समयमा उनकी श्रीमती फोहर कपडा प्रयोग गर्ने गर्थिन्। कपडा नभेट्दा त उनी पत्रिका पनि प्रयोग गर्थिन्। यो देख्दा मुरुगनांथमलाई पीडा हुन्थ्यो। त्यो असुरक्षित र अस्वस्थकर लाग्यो। उनले श्रीमतीलाई भने, ‘महिनावारीको
टर्‍यो अनुष्का र जोनको भिडन्तको खतरा
होलीलाई लक्षित गर्दै प्रदर्शनमा आउन लागेको अनुष्का शर्माको फिल्म ‘परी’ र जोन अब्राहमको फिल्म ‘परमाणु : द स्टोरी अफ पोखरण’ को महासंग्राम अब टरेको छ । यी दुई फिल्म मार्च २ मा एकसाथ रिलिज हुन लागेका थिए तर जोनले बक्सअफिस कलेक्सनलाई ध्यानमा राख्दै ‘परमाणु’ को रिलिज डेट पोस्टपोन्ड गरेका छन् । अब यो फिल्म अप्रिल ६ तारिखमा रिलिज हुनेछ । प्रोडक्शन टीमबाट एक व्यक्तिले दिएको जानकारी अनुसार, जोनसँग योभन्दा अरु विकल्प थिएन । उनले भने, ‘परी’ मा अनुष्काको डरलाग्दो अनुहारले यसअघि नै दर्शकको ध्यान खिचिसकेको छ । नयाँ प्रोमोले सनसनी मच्चाइरहेको छ । जबकी जोनको ‘परमाणु’ को अहिलेसम्म प्रचार नै सुरु भएको छ
‘जिरो’मा पुड्का साहरुख, यस्तो छ टिजर
एजेन्सी/ बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफ एकसाथ पर्दा सेयर गर्ने भएका छन् । फिल्म निर्माता सिद्धार्थ आनन्दले बनाउन लागेको फिल्ममा यी दुई एक्सन अभिनेतालाई एकसाथ पर्दा सेयर गरेको देख्न पाइने छ । अगस्टबाट छायङ्कन शुरु हुने फिल्मको नाम भने खुलाइएको छैन । यसै सालको आउदो डिसेम्बर २१ मा सार्बजनिक प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘जिरो’ लाई उक्त टिजरले झनै व्यग्र प्रतिक्षित बनाएको छ । आम फ्यानका लागि फरक शैलिमा प्रस्तुत भएको यो दोश्रो पटक हो । यसअघि उनि फरक गेटअपमा देखिएका थिए । हेर्नुस् ‘जिरो’ को टिजर यस्तो छ । ‘जिरो’ मा साहरुखको अलावा अनुष्का शर्मा, कैटरिना कैफ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । रेड चिल्ल
ज्याकलिनको पोल डान्सले ‘रेस-३’का निर्देशक हुरुक्कै भएपछि
केही समयअघि अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नाडीजले पोल डान्स गरेको भिडियो भाइरल भएको थियो । पोल डान्स एक किसिमको कामुक नृत्य हो । नृत्य र जिम्न्यास्टिकको संयोजनबाट तय गरिएको पोल डान्स अक्सर स्टि्रप क्लबमा देखाइन्छ । यी बलिउड सुन्दरीले जब कामुक पोल डान्स देखाइदिए, त्यसको राप सर्वत्र फैलियो । र, यसले रेमो डिसूजालाई पनि हुरुक्कै बनाएछ । उनले आफ्नो फिल्म ‘रेस-३’ मा ज्याकलिनको पोल डान्स दोहोर्‍याउने टुंगो गरे । यो फिल्म ‘रेस’ र ‘रेस-२’को सिक्वेल हो । निर्देशक रेमो डिसूजाले भनेका छन्, ‘ज्याकलिन एकदमै मिहेनती छिन् । कम समयमै उनी पोल डान्समा परांगत भएकी छिन् । हामीले उनको पोल डान्सको कौशल त देखिसकेका छौं । त